Kukarukureta ane rakakunguruswa uswa
mufanidzo Dzose 1: 0.5 1 2 3 4 5 6 8 10
Kureba rangano Y
Upamhi rangano X
rwakapetwa urefu A
rwakapetwa upamhi B
unganidza C, %
rwakapetwa uremu V
Kuisira kubva kuruboshwe kuenda kurudyi
Kuisa kubva kumusoro pasi
Mari patsangadzi nokuda 1 mupumburu
basa nokuti 1 mupumburu
Y - Kureba rangano
X - Upamhi rangano
A - rwakapetwa urefu
B - rwakapetwa upamhi
C - Reserve, akaratidza kuva chikamu
V - kurema mumwe mupumburu uri makirogiramu
Sarudzai Kugadzira nhungamiro nokuda vanoratidza ari pamufananidzo.
Kuverenga mari unogona tsanangurai mutengo paminiti rwakapetwa uye mutengo basa yawo installation.
Gadzira chikamu yako yakanaka wakatsetseka patsangadzi rubatsiro ano uye takasununguka rinopfungaira patsangadzi. Izvi herbaceous butiro, izvo zvaakatengesa mu mabhanzi ane turf pamwe yaiswamo mbeu uswa.
Kazhinji, yemakambani vachitengesa rinopfungaira patsangadzi, kupa rubatsiro uye Kugadzira yavo. Asi, tine vamwe ruzivo, unogona kuita basa pachako.
chirongwa yedu kuchaita overenga sei mabhanzi vazhinji patsangadzi kunokosha kuti pave kumeso manyoro butiro yose nzvimbo yenyu. All unofanira kuziva kuti izvi kukura nezverangano uye mumwe mupumburu turf uswa, uye chikamu Nehunde zvaunoreva. Neruzivo urwu, unogona exchange nyore nhamba mabhanzi kuti ungada, uye avo yaizoputsika mutengo. Pashure paizvozvo, zvose unofanira kuita kutenga muise patsangadzi renyu mumunda kana nechemberi patsangadzi.
Nzvimbo nemaoko avo - zviri nyore.
Tapota ona kuti chikamu Nehunde achava 5 muzana nokuda akawanda zano uye 10 nharaunda pamwe maruva mibhedha, ruva mibhedha uye mubindu nzira.
Asati achipfuura kuti kugadzwa patsangadzi, unofanira kugadzira nzvimbo yacho. Sezvo zvakakodzera kubvisa zvose marara, mabwe, abvise masora. Ivhu vachafanira kubata inokosha makemikari uye swatanudza. Zvadaro akaronga abudise. Pamugumo wenyika mukugadzirira chokutambudzika pachikuva pasi patsangadzi izere rakaorera, uye vhiki pamberi kutarisirwa Kuisa nourume. Asati amudanire patsangadzi, kana pasi iri rakaoma, zvinofanira wakanyorova.
Zvino patsangadzi anogona dziteyiwe. Izvi zvinofanira kuitwa pasina paya pane maawa 72 kubva panguva apo patsangadzi akagurwa. Kana, kana ichi hazvibviri, unofanira dhipuroya pevhu ari vata- pachivara uye mvura naro neapo kusvikira installation.
Regai peta mabhanzi pane mumwe kupfuura 4 akaturikidzana. Kunyange patsangadzi yakanaka mutoro yakakurisa contraindicated.
Rangarirai, ndizvo chinodiwa kuti vateye patsangadzi panguva imwe nguva. Izvi zvichaita kuumba mvere yunifomu bemhapemha.
Nguva yakanakisisa yokuti amudanire turf ichaongororwa kutanga kwematsutso kana chitubu. Asi zvinokosha kuti tiyeuke kuti munyika havafaniri kuva panguva ino muchando kana akanyanya nyoro.
Kuisa pevhu anotanga pedyo kunzvimbo zvakaoma kuchitoro. Kuisa patsangadzi vanofanira kuva achirurama mutsetse. Kana zvakakodzera, kufukidza nzvimbo vasiri mureza chimiro, nzvimbo yakaoma dzakavharika zvikuru akavezwa zvidimbu turf kubva wemari.
Mumwe musara butiro kutange uye kupera zvakazara mundiro, nhindi kuti kuchava kukura kwete isingasviki pahafu yacho. The dzasara zvidimbu zviduku akaisa Napamusara pakati, asi kwete munzvimbo.
Ndapedza nerimwe dzakatevedzana patsangadzi nekuumbanidzwa. In nokuumbwa pazvikomo kana depressions zvakakodzera kusimudza turf uye iti chechetere pemvura pasi. Ipapo zvakare nekuumbanidzwa patsangadzi.
Misara vakaiswa zvaizovhara hama kune mumwe akafanana rokuvaka. Zvakakosha kuti ave nechokwadi chokuti turf mahwendefa zvakasimba aimanikidzwa mumwe asi regai bindepinde.
Famba pamusoro ichangogadzwa vakaisa turf haina inokurudzirwa.
Mushure vapedza nokuiswa turf, nzvimbo zvakakodzera kuti zadza vazvo chaihwo musanganiswa. Murwiyo nezvakavhenganiswa ichi kunobva zvaunazvo dzako nzvimbo rwevhu.
Ulozheniju patsangadzi chinofanira zvakanaka vakakanda nemvura. On mumwe mativi mita achatora hapana asingasviki 15 litres. Munguva inotevera vhiki kamwe pazuva uswa achidiridzira unodiwawo.
Papera inenge mwedzi uswa nemidzi pachamera pamwe hwaro pamusoro wakange akaiswa pevhu, mapindu uye patsangadzi vachava yakasimba.
Pashure vaviri mavhiki pashure nokuiswa uswa inogona kuchekwa. Izvi zvinofanira kuitwa mhiri mirayiridzo yaro Kugadzira uye akatema pamwe chete pamusoro kupfuura madzinde uswa. nguva Last patsangadzi inowanzopiwa bvudzi ravo September.
Muchirimo, pashure pasi thawed, nembeu uye mowed patsangadzi zvakare, asi zvakare, akagura chete kumuromo kwematanda kupfuura madzinde uswa.
Panguva anodziya mwedzi, patsangadzi anofanira wakadiridzwa anenge ose 10 mazuva.